ဓါတ်ပုံ - Androidsis | Androidsis (စာမျက်နှာ ၂)
အက်ပလီကေးရှင်းများဓာတ်ပုံကိုစုစည်းရန်ရှာဖွေနေပါသလား။ အခမဲ့ဓာတ်ပုံများကိုစုစည်းရန်အကောင်းဆုံး 8 အက်ပ်များထဲမှဤရွေးချယ်မှုကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်။
သင့် Android ဖုန်းဖြင့်ပုံတစ်ပုံ၏စာသားကိုဘာသာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိရိယာမှတစ်ဆင့်ပုံ၏စာသားကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ သော်လည်းကောင်းသုံးနိုင်သည်။
သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့်သင်၏ကွန်ပျူတာမှဂီတကိုထိန်းချုပ်ရန် Microsoft သင်၏ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းကခွင့်ပြုသည်
သင်၏ဖုန်းမှ Windows 10 နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာမှသင့်မိုဘိုင်းတွင်ဖွင့်ထားသောတေးဂီတကိုသင်စီမံနိုင်ဖို့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Google Photos ပုံများကိုရေးခြစ်နိုင်သည်
ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများသည် Google Photos တွင်သိမ်းထားသောပုံများပေါ်တွင်ရေးခြစ်ရန်သို့မဟုတ်စာရေးရန်ခွင့်ပြုသည့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကိုထည့်လိုက်သည်
သင်၏စိတ်အထိခိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမည်သူမျှမမြင်စေလိုပါက 1Gallery သည်သင့်အားလုံခြုံစိတ်ချရသောဖိုလ်ဒါတစ်ခုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်မဟာမိတ်တစ်ခုရှိပြီးဖြစ်သည်။
Instagram သည် Reik feature ပါသော TikTok ကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းစေသည်
အခြား application များမှ Instagram ကိုကူးယူခဲ့သောနောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်မှာ TikTok ကကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသကဲ့သို့ ၁၅ စက္ကန့်ဂီတဗီဒီယိုများဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်
Google Photos တွင်မကြာမီဖြန့်ချိမည့်ဓာတ်ပုံအဟောင်းများအားအနက်နှင့်အဖြူရောင်ဖြင့်အရောင်တင်ရန်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုကာတွန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်အတွက်မည်သည့်အရာကိုအသုံးချရမည်ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြု။ သင်ကြားပေးသောဗွီဒီယို post ။
သင်ကြီးပြင်းလာသောအခါမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။ နာမည်ကြီးတွေသုံးတဲ့ app က !!
Google Lens ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအပြင်သင်လုပ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုရှာဖွေပါ၊ သင်၏ Android ဖုန်းတွင်အချိန်မရွေးသင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဤအပလီကေးရှင်း။
ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံတွေဟာမှောင်မိုက်တဲ့ mode ကိုဖြည့်စွက်ပြီးစတင်တယ်
ဂူဂဲလ်သည်မှောင်မိုက်ခြင်းစနစ်ကို Google Photos application တွင်လည်းအသုံးပြုရန်အဝေးကနေစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အံ့မခန်းဖွယ် 3D ဓါတ်ပုံပြခန်း !!
လက်ရှိ Android ထုတ်ကုန်များရှိသည့်ဂရပ်ဖစ်အရင်းအမြစ်များနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသော 3D ဓာတ်ပုံပြခန်း
Android ကိုသတိရခြင်း: Android ဓာတ်ပုံပြခန်းဟောင်းကိုသင်မှတ်မိသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး Android ဓာတ်ပုံပြခန်းဟောင်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုပြသသည့် Remembering Android အပိုင်းမှဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခု။
မင်းကိုငါနောက်တစ်ခေါက်ယူဆောင်လာတဲ့ Quickpic ပြခန်းကိုသင်ကြိုက်ခဲ့လျှင်သင် Quickpic အစားအခြားရွေးချယ်မှုကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ အလင်းနှင့်အလွန်အလုပ်လုပ်သောဓာတ်ပုံပြခန်း။
Google Photos သည်ဖုန်းခေါက်ရာတွင်အလုပ်လုပ်ရန်၎င်း၏ interface ကိုအသစ်ပြောင်းသည်
ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများအတွက်ဖြန့်ချိထားသည့် update နှင့် ပတ်သတ်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၎င်းအားဖုန်းများခေါက်ရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ Android terminal တွင် Samsung Galaxy S10 ကင်မရာကိုကူးယူပါ။ Android Jelly Bean နှင့်အထက်
မည်သည့် android terminal အတွက်မဆို Samsung Galaxy S10 ကင်မရာကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအကောင်းဆုံးကင်မရာများမှတစ်ခုကိုခံစားကြည့်ပါ။
Cheetah Traceless QuickPic Mod APK ကို Download လုပ်နည်း
ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွင် Cheetah mobile ၏သဲလွန်စမရှိသောပြုပြင်ထားသော QuickPic APK ကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ပြသမည်။
Photo Map သည်သင်၏ Google Photos ကိုမြေပုံပေါ်တွင်စူးစမ်းလေ့လာစေသည်
အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာရှိသောဆိပ်ကမ်းများသို့မဟုတ်သင်ရိုးရှင်းသော application များကိုနှစ်သက်လျှင်၊ သင့်အတွက်ဤအလင်းနှင့်အလုပ်လုပ်သောဓာတ်ပုံပြခန်းကိုကျွန်ုပ်ထံယူဆောင်လာပါမည်။
192 MP အထိကင်မရာများအတွက် Qualcomm မှမိတ်ဆက်ပေးမည့်တိုးတက်မှုများကိုရှာဖွေပါ။ ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်မှအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
ဖြေရှင်းချက်။ ။ Huawei Camera သည် HD ဗီဒီယို၊ Smart Shot၊ Quick Snapshot နှင့်သင်၏ Huawei အတွက်ပိုမိုလှည့်ကွက်များကိုသာမှတ်တမ်းတင်သည်။
ငါစိတ် ၀ င်စားစရာအချက်များနှင့် Huawei ကင်မရာအပလီကေးရှင်း၏အရည်အသွေးပြောင်းလဲမှုကိုမပြုပြင်နိုင်သည့်ပြtheနာအတွက်သင့်အားငါထားခဲ့၏။
Razer Camera2အက်ပလီကေးရှင်းသည်ဗီဒီယိုများကို ၆၀ fps နှုန်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်
Razer Phone2အက်ပလီကေးရှင်းသည်စျေးကွက်ရှိစမတ်ဖုန်းအများစုတွင်မရရှိနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြီးသည်။
ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပမည့် Pre-MWC 10 ပွဲ၌ OPPO တင်ပြပြီးသော 2019x optical zoom နည်းပညာအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Adobe Photoshop Express ကကျွန်ုပ်တို့အား watermarks ၏အရွယ်အစားကိုပြုပြင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ filter အသစ်များထပ်ထည့်မည်
Adobe Photoshop Express ၏အသစ်ပြုပြင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်အဆန်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်သောရေစာအမှတ်အသားများ၏အရွယ်အစားကိုပြုပြင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
Blur Effect ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲ၊ သင်၏ Android နှင့်ရိုက်ကူးထားသောဓါတ်ပုံများတွင် Portrait Mode ကိုမည်သို့အသုံးပြုမည်နည်း
မည်သည့် Android terminal နှင့်မဆိုရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများအတွက်ပုံတူ mode ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြသည့်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ။ အံ့သြဖွယ်ရလဒ်များ !!
သင်၏မှတ်စုများကိုယူရန်၊ ဖိုင်များဆွဲရန်၊ စူးစမ်းလေ့လာရန်၊ သင်၏အဆက်အသွယ်များကိုစီမံရန်သို့မဟုတ်သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်အတွက် Simple မှပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အက်ပ် ၅ ခုပါရှိသည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံအက်ပလီကေးရှင်းငါးခု Android မှာဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီ application တွေအကြောင်းကိုပိုရှာကြည့်ပါ ဦး ။
သင်၏ကိရိယာမှသင်ဖျက်လိုက်သည့် WhatsApp ပုံရိပ်များသို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်
ဖျက်လိုက်သည့် WhatsApp ပုံရိပ်များကိုရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်တစ်ခုဖြင့်ချက်တင် app တွင်သတိမပြုမိဘဲမည်သို့ပြန်လည်ကောင်းမွန်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံပြခန်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု။ ထူးခြားသော !!
WhatsApp သည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောဓာတ်ပုံများကိုပြခန်းမှဖုံးကွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ messaging app အတွက် beta ထဲရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောအင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ပြခန်းဓါတ်ပုံများကိုစီစဉ်ရန်အကောင်းဆုံး Android အက်ပလီကေးရှင်းများ
သင်၏ပြခန်းဓါတ်ပုံများကိုစုစည်းရန်အကောင်းဆုံး Android အက်ပ်များ။ ဤရွေးချယ်မှုကို၎င်း၏အမျိုးအစားအတွင်းရှိအကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
သင်၏ WhatsApp ၏ပရိုဖိုင်းဓါတ်ပုံများသည် Facebook ပေါ်တွင်ဖြစ်သည်
WhatsApp သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံများကို Facebook ပိုင်ဆာဗာများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးစေဘဲ WhatsApp မှဓာတ်ပုံများပို့ပါ
WhatsApp မှတစ်ဆင့်ဓါတ်ပုံများကိုပို့သောအခါအပလီကေးရှင်းသည်သူတို့၏အရည်အသွေးကိုလျော့နည်းသွားစေကြောင်းသင်သိပါသလား။ ဒီနေ့မင်းတို့ဖမ်းယူမယ့်အသေးစိတ်အချက်အလက်မပါဘဲဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတာရှင်းပြပေးတယ်
Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းမှGastón Revol မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ application ကိုကြိုးစားဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ဒီလက်တွေ့ကျသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအသစ်တွင်မည်သည့် Android2နှင့်အထက်မဆို Google Pixel XL7.0 ကင်မရာကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသင်ပြပါမည်။ LG G6 တွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
သင် Instagram ကိုနှစ်သက်ပါကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဓာတ်ပုံများနှင့်အခြားအရာများကိုလည်းကြီးမားသောနည်းလမ်းဖြင့်မျှဝေနိုင်သည်
နောက်တခါ Android အတွက် APK of Photoshop Touch (Android အတွက်မူရင်း Photoshop ဖြစ်သင့်သည့်အရာများ) ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ပါသည်။
အချက်အလက်များကိုသိမ်းရန် WhatsApp ရှိဖိုင်များ (ဗွီဒီယိုများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်စသည်တို့) ကိုအလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းကိုမည်သို့ရပ်တန့်ရမည်ကိုဖော်ပြသည့်ရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာ။
Google Photos, Slidebox နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င် Android တွင်ဓာတ်ပုံများကိုစီမံရန်နှင့်ကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံး application အချို့ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါသည်။
Android အတွက် Google ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်မကြာသေးမီကမွမ်းမံမှုများကြောင့်ရုပ်ပုံများကို GIF၊ clip art သို့မဟုတ်အရောင်များနှင့်စီစစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Android တွင်မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးရန်အတွက်အကောင်းဆုံး application များအပြင် ၃၆၀ ဒီဂရီသို့မဟုတ် virtual reality ဓါတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည်။
Android အတွက် Google ၏စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် burst shooting technique ကို အသုံးပြု၍ ညဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကွန်ပျူတာ (သို့) အင်တာနက်ဘရောက်ဇာကို သုံး၍ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆို Google Photos ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ (နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်ထားသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ)
၎င်းကိုခေါ်နိုင်လျှင်လက်တွေ့ကျသောသင်ခန်းစာမှာအလွန်ရိုးရှင်းပြီး PC မှ Google Photos ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်ပေးမည်။
လူကြိုက်များသော Meitu ဓာတ်ပုံအက်ပလီကေးရှင်းသည်လက်ရှိတွင် IME, MAC လိပ်စာနှင့်အခြားဆာဗာများသို့အသုံးပြုသူအမျိုးမျိုး၏အဆိုအရပေးပို့သည်။
သင်၏ Android မိုဘိုင်း (သို့) တက်ဘလက်တွင်ဓါတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ရန်နှင့်ပြန်လည်ထိတွေ့ရန်အကောင်းဆုံးအပလီကေးရှင်းများကိုရှာဖွေပါ။ သူတို့ကိုသင်မစမ်းသေးဘူးလား။ သူတို့ကအခမဲ့ပါ။
WhatsApp သည် beta တွင်ရုပ်ပုံ ၃၀ ပုံပေးပို့ရန်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်
အကယ်၍ သင်သည်ရုပ်ပုံများကိုသုံးစွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး WhatsApp ရှိသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အဆက်အသွယ်များအား၎င်းတို့ထံပေးပို့ခြင်းကိုအာရုံစိုက်မည်ဆိုလျှင်တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ၃၀ အထိပေးပို့နိုင်သည်။
Play Store တွင်တရား ၀ င်ဒေါင်းလုပ်မရနိုင်သောကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Google apk မှ Google ကင်မရာကိုမည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်၊
Android တွင်ဓာတ်ပုံပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောအက်ပ် ၄ ခု
အကယ်၍ သင်သည်ဓာတ်ပုံပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးဆက်ကပ်အပ်နှံထားသူအချို့ကိုသိကျွမ်းလာပါကဤစာရင်း ၄ ခုသည်အသုံးဝင်သည်။
[APK] PhotoScan - ဓာတ်ပုံများကိုစကင်ဖတ်ရန်တွက်ချက်သည့်ဓာတ်ပုံကိုသုံးသောဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်
Photoscan သည်အကောင်းဆုံးရလဒ်ရရှိရန်တွက်ချက်သည့်ဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုသည့်ဓာတ်ပုံများကိုစကင်ဖတ်ရန် application အသစ်ဖြစ်သည်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သင်၏ Android ဓါတ်ပုံများသို့အထူးသက်ရောက်မှုများကိုထည့်သွင်းရန်အကောင်းဆုံး app သည် SKRWT ကိုတင်ပြပြီးအကြံပြုပါသည်။
သင် Snapseed, VSCO သို့မဟုတ် Prisma အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင် Polarr သည်သင်တည်းဖြတ်။ မရနိုင်သောဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော app တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှုံးပါ သင်၏စမတ်ဖုန်းကင်မရာကိုယူပြီးတစ် ဦး ချင်းစီကိုဖမ်းယူခြင်းဖြင့်သင်၏နေ့စဉ်အစားအစာအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Telegram ကိုဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာအသစ်၊ GIFs နှင့် featured စတစ်ကာများဖြင့် update လုပ်သည်
Telegram ဟာအကောင်းဆုံး chat app များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုသူသည်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာအသစ်၊ ထူးခြားသောစတစ်ကာများနှင့် GIF ဖန်တီးမှုအသစ်ဖြင့်ဗားရှင်းအသစ်ကိုလက်ခံရရှိသည်။
ဓာတ်ပုံပြန်လည်ထိတွေ့ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် VSCO သည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုအသစ်ပြန်လုပ်သည်
VSCO သည်သင်၏ဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေနိုင်သောစစ်ထုတ်ကိရိယာများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်သုံးစွဲသူများအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုအသာပုတ်ပါကကင်မရာအက်ပ်အပါအ ၀ င်မည်သည့်အက်ပ်တွင်မဆိုဓာတ်ပုံများကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်
Now On Tap ၏ဤအသစ်စက်စက်အပြင်၊ ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုရရှိရန်မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်း၌ပင်စာသားရွေးချယ်မှုကို Google က activate လုပ်ခဲ့သည်
Magic Cleaner သည် WhatsApp အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ဂရုမစိုက်သည့်အပြင်ကျန်ရှိသောပုံများကိုဖျက်ပစ်သည်
Magic Cleaner သည် WhatsApp ၏အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသင်အလိုအလျောက်ဖျက်ရန်သင်ရှိအမှိုက်ပုံများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
သင်၏မျက်နှာကိုလှပပြီးအကောင်းဆုံး selfie ယူရန်ကင်မရာအက်ပ် ၅ ခု
သင်၏ Android ဖုန်းဖြင့်သင်ရိုက်ကူးသည့် selfie များထဲမှသင်၏မျက်နှာကိုလှပအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းငါးခုနှင့်၎င်းကိုလူမှုကွန်ယက်များသို့တင်ပါ။
သင်၏ WhatsApp ဓါတ်ပုံများကို Google Photos တွင်သိမ်းဆည်းခြင်း။ နေရာအကန့်အသတ်မရှိ !!
သင်၏ WhatsApp ဓါတ်ပုံများကိုဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာအားလုံး (ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ) ကိုအလိုအလျောက်မပိုင်ဘဲအလိုအလျောက်ထပ်တူပြုခြင်းဖြင့်သိမ်းဆည်းခြင်း။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံ retouching app သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံ retouching application သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မည်မျှလွယ်ကူစွာအသုံးပြုသည်ကိုသင့်အားတင်ပြရန်၊ သင်ပေးရန်နှင့်သင်ကြားရန်ဖြစ်သည်။
Pool သည် Mediafire အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်ပြီးပါတီများနှင့်ပွဲနေ့များတွင်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေရန်ဖြစ်သည်
Pool သည် Mediafire တီထွင်ထားသော app တစ်ခုဖြစ်ပြီးပါတီတစ်ခုသို့မဟုတ်အခမ်းအနားတစ်ခုတွင်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံအားလုံးအတွက် ဦး တည်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Focus သည်သင်၏ပုံအားလုံးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစုစည်းရန် tag-based ပြခန်းအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်
ပုံများရှိ tags များသည်ဤ app ၏အရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်သင်၏ဓာတ်ပုံများအားလုံးကိုကိုယ်ပိုင်ပုံစံဖြင့်စုစည်းနိုင်သည်။
Facebook သည်ဓာတ်ပုံများဝေမျှရန် Moments အက်ပလီကေးရှင်းကိုလွှတ်တင်သည်
Facebook Moments သည်လုံးဝလွတ်လပ်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏အဆက်အသွယ်များနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုလျှင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူမျှဝေနိုင်သည်။
အခမဲ့ဓာတ်ပုံများကိုရှာဖွေရန်စာရင်း၊ Creative Commons အက်ပ်
Creative Commons သည် Android ပုံပေါ်ရှိ List app ကိုအခမဲ့ပုံများရှာဖွေရန်နှင့်အခမဲ့ဓါတ်ပုံများဘဏ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အခြေခံ Android သင်ခန်းစာများ - ဒီနေ့၊ WhatsApp ရဲ့ profile ပုံကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ
သင်၏ Android WhatsApp ပရိုဖိုင်းရုပ်ပုံကိုမည်သို့အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးသောအခြေခံ Android သင်ခန်းစာ
WhatsApp ၏ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Android တွင်ဝှက်ရန်
ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်အော်ဒီယိုများကိုသင်၏စမတ်ဖုန်းပြခန်းမှဝှက်ထားရန်၊ သင်၏ဓာတ်ပုံများကိုပြသရန်မကောင်းသည့်အနေဖြင့်ရှောင်ရှားရန်
Android 5.0 ရှိ Google+ ဓါတ်ပုံများကိုအစားထိုးရန် Lumific သည် app တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ကိုဒီဇိုင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးကောင်းစွာဂရုစိုက်သည်
သင်၏ Android မှဖျက်ထားသောဓါတ်ပုံများကိုပြန်လည်ရယူရန်အက်ပလီကေးရှင်း ၃ ခု
ဓါတ်ပုံတွေကိုဖျက်ပစ်တဲ့အခါမင်းဟာဘေးအန္တရာယ်ကြုံနေရလား။ ဒီနေ့မှာမင်းတို့ရဲ့ Android မှာဖျက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက် app ၃ ခုကိုပြပြီးအဲဒီမှာပြန်ရယူဖို့ကြိုးစားပါမယ်။
Droid Protector ဖြင့် Android တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုသော့ခတ်ပါ
Droid Protector အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်အက်ပ်များကိုမည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်၊ Android ကိုပုံတွင်မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်ကိုသင့်အားသင်ကြားပေးသည်
ပွင့်လင်းသောကင်မရာက Android 4. နှင့်အထက်ရှိကိရိယာများပေါ်တွင်မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံပညာအတွေ့အကြုံအသစ်ကိုပေးသည်။ ၎င်း၏တီထွင်သူက၎င်းသည်တုန့်ပြန်မှုပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတ်ပုံကိုဓာတ်ပုံရိုက်ရန်သာအာရုံစိုက်ရသည်။ ကျန် app ကိုပြုလုပ်သည်။
လူကြိုက်များသော iOS Photo Retouching app သည် Afterlight ဟုခေါ်သော Android သို့လာသည်
Afterlight သည်ဓာတ်ပုံ retouching အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော app တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အခမဲ့မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် iOS တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။
Android အတွက် Over မကြာသေးမီရက်များအတွင်းကသင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုအားလုံးကိုသွန်းလောင်းရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
၉။ တစ်ရက်အတွက်အခမဲ့ Paid Photo Editing Apps များကို Amazon တွင်သာရယူနိုင်သည်
ဒီကနေ့ပဲ Amazon မှာ Amazon အခမဲ့ဓာတ်ပုံအခမဲ့တည်းဖြတ်ခြင်း ၉ ခုကို download လုပ်နိုင်ပါပြီ
AVG Image Shrink & Share သည်သင်၏ပုံရိပ်များ၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန် application ဖြစ်သည်
AVG Image Shrink & Share သည်သင်၏ပုံရိပ်များ၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချပေးပြီး၎င်းကိုသုတ်သင်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Android တွင်ဖျက်ထားသည့်ဓါတ်ပုံများကိုပြန်လည်ရယူရန် application ၃ ခု
အမှားတစ်ခုကြောင့်သို့မဟုတ် MB မရှိခြင်းကြောင့်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှဓာတ်ပုံများကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်လျှင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Android တွင်ဖျက်ထားသောဓါတ်ပုံများကိုပြန်လည်ရယူရန်အက်ပလီကေးရှင်း ၃ ခုအကြောင်းပြောနေသည်။
Android အတွက်သမားရိုးကျမဟုတ်သောအခမဲ့ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူသုံး ဦး
သင်၏ Android terminal ကိုအခွင့်ကောင်းယူမည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ပြသနေပြီး၊
WhatsApp သည်မည်သူမဆိုသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဓာတ်ပုံများကိုမကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်တားဆီးခြင်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူများ၏ privacy ကိုတိုးတက်စေမည့် update တစ်ခုပြုလုပ်လိုက်သည်။
SnapPea အက်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့်သင်၏ Android ဖုန်းရှိသင့်ဓါတ်ပုံများကိုသင့်ကွန်ပျူတာနှင့်စည်းညှိပါ။
ဓါတ်ပုံချစ်သူများအတွက်ထိပ်တန်း Apps ၅ ခု
ဓာတ်ပုံပညာသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။ များစွာသောအရာများနှင့်ကိုက်ညီသောတည်းဖြတ်သူများ၊ စစ်ထုတ်မှုများ၊ အရည်အသွေးပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ... ဤအရာအားလုံးသည် Play Store တွင်ဖြစ်သည်။
Pixlr-o-matic သည် Android အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်ပုံအယ်ဒီတာဖြစ်သည်